Vavolombelona ara-paminaniana - fanisana amin'ny fanjakana
St. John Paul II dia nametraka ny làlana ho an'ny fiangonana mankany amin'ny vanim-potoana vaovao, vanim-potoanan'ny fandriam-pahalemana (jereo ny Timeline).
Aorian'ny fanadiovana amin'ny alàlan'ny fizahan-toetra sy ny fijaliana, manomboka eo ny fiandohan'ny vanim-potoana vaovao. —General Audien, 10 septambra 2003
Ireo tanora dia naneho ny tenany ho an'i Roma sy ho an'ny Fiangonana ho fanomezana manokana ny Fanahin'Andriamanitra ... tsy nisalasala aho nangataka azy ireo hanao safidy tsara sy finoana ary hanolotra azy ireo amin'ny asa manaitra: ho tonga “maraina mpiambina ”tamin'ny fiposahan'ny taona arivo vaovao. -Novo Millennio Inuente, n.9
… Mpitily izay manambara amin'izao tontolo izao fa vao maraina, fanantenana sy firahalahiana. —Adiresin'ny Hetsiky ny Tanora Guanelli, 20 aprily 2002, www.vatican.va
Tian'Andriamanitra ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra eto an-tany ary manome azy ireo fanantenana vanim-potoana vaovao, vanim-potoanan'ny fandriampahalemana. - Hafatra avy amin'ny Papa John Paul II amin'ny fankalazana ny andro manerantany fandriam-pahalemana, 1 Janoary 2000
Andriamanitra mihitsy no nanomana hanatanteraka izany fahamasinana "vaovao sy masina izany" izay tadiavin'ny Fanahy Masina ny hampanan-karena ny kristiana amin'ny voalohan'ny taona arivo fahatelo, mba “hahatonga an'i Kristy ho fon'izao tontolo izao.” - Adiresy tamin'ireo Ray any Rogationist, n. 6, www.vatican.va
Toy izany ny asa feno ny drafitry ny Mpamorona nofinofy: famoronana iray izay miray Andriamanitra sy ny lehilahy, ny lehilahy sy ny vehivavy, ny maha-olombelona ary ny natiora, ao anatin'ny fifampiresahana, amin'ny firaisana. Ity drafitra ity, sorena noho ny ota, nalaina tamin'ny fomba mahatalanjona kokoa nataon'i Kristy, izay manatanteraka an-tsokosoko nefa mahomby amin'ny zava-misy ankehitriny, amin'ny fiandrasana hahatanteraka azy… —General Audien, 14 Febroary 2001
Izany no fanantenanay lehibe sy fiangavianay hoe: 'Ho tonga ny fanjakanao!' - Fanjakan'ny fandriam-pahalemana, fahamarinana ary filaminana, izay hampiorina indray ny firindrana voalohany amin'ny famoronana.—General Audien, 6 Novambra 2002, Zenit
Enga anie ka hisy maraina ho an'ny rehetra, amin'ny fotoan'ny fandriam-pahalemana sy ny fahalalahana, ny fotoan'ny fahamarinana, ny fahamarinana ary ny fanantenana. —Fampitana radio, Vatican City, 1981
Tsaroantsika androany ity, ny fahatsiarovana azy, ireo fanomezana lehibe nomeny ny Fiangonana: ny Katesizan'ny Fiangonana Katolika, ny "teolojia an'ny vatana," St. Faustina ary ireo hafatra lehibe an'ny "Mercy Divine" ary, indrindra indrindra, ny vavolony hatramin'ny farany.
Ny mpandray anjara eto amintsika ao amin'ny Countdown, Mark Mallett, dia nanoratra ity hira ity talohan'ny nahafatesany: "Song for Karol", duet miaraka amin'i Ms. Raylene Scarrott.
Vakio ny tantaran'i Marka "adala" nihaona tamin'ny naman'i John Paul II rehefa nankany Vatican izy hihira ny "Song for Karol". Read Md Joany Paul II.
← Sambo rendrika lehibe?
Valeria - Tsy mbola nisy… →